ကျွန်တော့်ညီမလေးကို ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ကို တချက်တည်းမဟုတ် ၆ချက်တိတိဓားနဲ့ထိုးသွင်းထားတာ
ကျွန်တော့်ညီမလေးကို ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ကို တချက်တည်းမဟုတ် ၆ချက်တိတိဓားနဲ့ထိုးသွင်းထားတာ မူးယစ်ဆေးဝါးလည်း သုံးထားတယ် …. ။ ကြိုတင်ကြံစည်မှုလည်း သိသာနေတယ် … ။ သေစေလိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ကို တချက်တည်းမဟုတ် ၆ချက်တိတိ ဓားနဲ့ထိုးသွင်းပြီး ကျွန်တော့်ညီမလေးကို သတ်သွားတဲ့ လူတယောက်လို့ မခေါ်ထိုက်တဲ့သက်ရှိဝတ္တုတခုအတွက် ကျေအေးခြင်းကလုံးဝမရှိပါဘူး … ။ ဘာသာတရားအဆုံးအမတွေက Continuous reading
သတိပြုဖွယ် အရက် အဆိပ်သင့်ခြင်း
သတိပြုဖွယ် အရက် အဆိပ်သင့်ခြင်း အရက်အဆိပ်သင့်ခြင်း (အရက်သမားလေးတို့ သိမှတ်ဖို့) အရက်မူးလွန်တယ် တနည်းအားဖြင့် အရက်အဆိပ်သင့်တယ်ဆိုတာ ကိုယ်တွေအပြင်လောကမှာ ကြုံနေကျ အရာတစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်.. ကိုယ်သောက်နေကျ ပမာဏထက် အရက်ကို ပိုသောက်မိတဲ့အခါမှာ လူက လစ်တော့တာပါပဲ။ နည်းနည်းလေးမူးတဲ့အခါမှာ လူက ယိုင်တိယိုင်တိုင်နဲ့ ရီဝေဝေအိပ်ချင်သလိုဖြစ်လာမယ်။ တချို့ကတော့ ပြောင်းပြန် Continuous reading
ဘယ်လိုမှမတတ်နိုင်ပေမယ့် စိတ်ညစ်စိတ်ပျက်နေစရာမလိုတဲ့ အချက် (၁၀)ချက်
ဘယ်လိုမှမတတ်နိုင်ပေမယ့် စိတ်ညစ်စိတ်ပျက်နေစရာမလိုတဲ့ အချက် (၁၀)ချက် စိတ်မပျက်ပါနဲ့ ဆွေးစရာမရှိတဲ့….ဘဝမှာ ဘယ်လိုမှမတတ်နိုင်တဲ့ အချက်၁၀ချက် ဘဝထဲက ဘယ်လိုမှမတတ်နိုင်တဲ့ (၁၀)ချက်။ ၁။ သင့်ကိုခွဲသွားတဲ့သူ သင့်ကိုခွဲသွားတဲ့သူက သင့်ကိုဆုံးရှုံးသွားတာ… သင်က သူ့ကိုဆုံးရှုံးသွားတာမဟုတ်ဘူး၊ သူခွဲခွာသွားတာက နောက်တစ်လမ်းက အခုလျှောက်နေတဲ့လမ်းထက်ကောင်းလို့ ရွေးခြယ်လိုက်တာ။ “ ခွဲခွာခြင်းက အသက်ရှင်စဉ်တစ်လျှောက်လုံး အများကြီးတွေ့ Continuous reading
30/10/2019 Yan Naing 0
ယှဉ်ပြိုင်လိုစိတ် ပြင်းထန်ပြီး စိတ်မရှည်တတ်တဲ့ အေသွေး သင့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ယှဉ်ပြိုင်လိုစိတ် ပြင်းထန်သူတွေ၊ တော်တန်ရုံကို စိတ်မရှည်တတ်သူတွေကို တွေ့မိတဲ့အခါ အံ့သြကောင်း အံ့သြ ပါလိမ့်မယ်။ အများနဲ့ကွဲပြားနေတတ်တဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကို သင်သတိထားကောင်းထားမိပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ဟာ အမျိုးအစား A ကိုယ်ရည် ကိုယ်သွေး (Type A personality) ပိုင်ရှင်တွေ Continuous reading
မလေးရှား တွင် ဖုန်းဂိမ်း ကစားလွန်း၍ ကြောင် နေသည့် လူငယ် တစ်ဦးကို မြန်မာပြည် ပြန်ပို့
မလေးရှား တွင် ဖုန်းဂိမ်း ကစားလွန်း၍ ကြောင် နေသည့် လူငယ် တစ်ဦးကို မြန်မာပြည် ပြန်ပို့ မလေးရှား နိုင်ငံတွင် သွားရောက် အလုပ်လုပ်ကိုင်ရာမှ ဖုန်းဂိမ်း ကစားမှု များပြားလွန်း၍ ကြောင်တောင်တောင် ဖြစ်နေသည့် မြန်မာ လူငယ် တစ်ဦးကို ကူညီကာ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်ပို့ပေးခဲ့ Continuous reading
အိမ်ဂေဟာ လာဘ်ပွင့်အောင် ဆီမီးသုံးခွက်ဖြင့်ပူဇော်ရမည့် ဂါထာ
အိမ်ဂေဟာ လာဘ်ပွင့်အောင် ဆီမီးသုံးခွက်ဖြင့်ပူဇော်ရမည့် ဂါထာ မိမိ အိမ်ဂေဟာ လာဘ်ပွင့်အောင် အပူသောကမျိုးစုံနှင်. ရင်ဆိုင် နေရသူများ အကျပ်အတည်များ မထွေးနိူင် မအန်နိူင်ဖြစ်နေသူများ မိမိ အိမ်ဂေဟာ ကျက်သရေ မင်္ဂလာအဖြာဖြာ ဖြစ်အောင်နှင့် လာဘ်လာဘ. ပွင့်လန်း လာစေရန် အောက်ပါ အတိုင်း အကျိုးပေးလျှင်မြန် စရေအခါ Continuous reading
ရိပ်ခနဲ ရိပ်ခနဲ ခေါင်းမူးလျှင် သတိပြုရမည့် အချက်များ
ရိပ်ခနဲ ရိပ်ခနဲ ခေါင်းမူးလျှင် သတိပြုရမည့် အချက်များ ရိပ်ခနဲ ရိပ်ခနဲ မူးသွားတာ ဘာကြောင့်လဲ ?ထိုင်နေရာကနေ ရုတ်ခနဲ ထလိုက်ရင် ရိပ်ခနဲ မိုက်ခနဲ ခေါင်းမူးပြီး လူက ယိုင်သွားတာမျိုး လူအတော်များများ ကြုံဖူးကြ လိမ့်မည်။ ထိုသို့ ဖြစ်ခြင်း သည် သိပ်မစိုးရိမ် လောက်သော Continuous reading
ခီမောင်နှံဆီက ဟာသကား တစ်ကားကို စောင့်မျှော် နေတဲ့ ပရိသတ် အတွက် အဖြေပြန်ပေး ခဲ့တဲ့ ဇဏ်ခီ
ခီမောင်နှံဆီက ဟာသကား တစ်ကားကို စောင့်မျှော် နေတဲ့ ပရိသတ် အတွက် အဖြေပြန်ပေး ခဲ့တဲ့ ဇဏ်ခီ ခီ မောင် နှံ ။ အ ချိန် အ တော် ကြာ ခေါက် ရိုး ကျိုး အ သား ကျ Continuous reading